Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Brazil Gabriel Baby Jesus Story Plus Na-emeghe Eziokwu Ihe Echiche
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mara aha na aha njirimara; 'Neymar obere'.
Anyị Gabriel Jesus Child Story Plus Na-enweghị Nkọwa Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nyocha nke Brazil Striker gụnyere akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ obere amaara ama gbasara ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ebumnuche ya-ịtụ egwu kama ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle akụkọ banyere akụkọ banyere akụkọ Jesus Gabriel nke gụnyere ịmatakwu banyere nne na nna ya, ụmụnne ya nwoke, nwanne ya, na ibi ndụ ya.
Ugbu a na-enweghị n'ihu adieu, ka anyị bido.
Gabriel Jesus Childhood Akụkọ - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Gabriel Fernando de Jesus mụrụ na 3 nke ụbọchị Eprel 1997 na Sao Paulo, Brazil site n'aka Vera Lúcia Jesus (Nne) na Diniz de Jesus (Nna). A mụrụ ya dị ka nwa ikpeazụ amụrụ na ezinụlọ nke ụmụ 4 (3 nwoke na nwanyị).
N'ezie, ịbụ nwa ikpeazụ na nwa ụlọ nwere ọtụtụ uru. Nye Gabriel, ihe kpatara ya dị iche. Mama ya kụziri ịdọ aka ná ntị ma kwe ka ọ na-aga n'okporo ámá.
Ọ tolitere na agbata obi Jardim Peri nke dị na mgbago ugwu nke Sao Paulo. Dị ka ọtụtụ ndị ọgba bọọlụ (wdg Marcus Rashford) Onye nne na nna ya zụlitere, a na - akpọlite ​​Gabriel Jesus n'okporo ámá.
Ọ kpọrọ ọkpụkpọ n'okporo ámá ọkpụkpọ ya. Dịka nwatakịrị dị afọ 5 na-egwu Brazil Samba n'ofe n'okporo ámá, a na-eji Gabriel egwu egwu Central Midfield karịa ịwakpo.
dị nnọọ ka Alex Oxlade-Chamberlain, amaara ya na o bu onye mo-mo oso ososo n'oge obu nwata. O mechara gbanwee wee wakpo ya mgbe 2002 World Cup.
Oge mgbanwe a bịara mgbe ọ chọtara ma gbanwee maka arụsị iko ụwa ya, Ronaldo Luis Nazario de Lima.
Oge mgbanwe a bịakwara na ya dịkwuo njọ na football. Ọ na-egosi ịbanye na ụlọ akwụkwọ football dịka e gosipụtara n'okpuru.
Gabriel Jesus Biography - Na-ewu Onwe Ya Akụkọ:
Mgbe egosiri maka ọtụtụ ndị ntorobịa (ụfọdụ nwere aha dị jụụ dị ka Little Kids of the Environment).
Ọ bịara mara ụfọdụ akụkụ buru ibu nke mpaghara ahụ mgbe ọ kwakọbara ihe mgbaru ọsọ 29 maka otu onye na-amu amu Anhanguera Associacao Paulista na asọmpi n'okpuru-15 mpaghara. N'okpuru ebe a ka kaadi ID ya maka klọb.
Gabriel Jesus ID maka ụlọ ọrụ ntorobịa ya.
Ọganihu ndị ọzọ mere ka o nwee ohere ịkwaga na ụlọ egwuregwu Palmeiras a ma ama maka igwu egwuregwu ha.
Ọbụna na 15 Gabriel nwere onye nnọchi anya, onye haziri ikpe na Palmeiras, otu n'ime otu ndị otu kachasị na Brazil. Naanị otu afọ mgbe nke ahụ gasịrị, ndị na-akwado ya amaalarịrị maka ya ka ọ gbagoo n'akụkụ ndị agadi. Nke a bụ n'ihi na ọ dị mma n'oge ọ dị obere.
N'oge ahụ, ndị isi Palmeiras nọ na-asọpụ site na mbupụ ụgbọ elu Brazil. Gabriel Jesus ji aka ya duru ha gaa n'osisi nke ndi otu a.
N'ụbọchị ikpeazụ nke mmetụta uche nke oge ahụ, Gabriel na-enwu dị ka ọ dịtụbeghị mbụ. Omume ya mgbe ọ dị obere nke 18 mere ka ndị na-egwu egwuregwu gburugburu ụwa lelee ya. N'agbanyeghị ụda niile gbara ya gburugburu, Gabriel enweghị uche ọ bụla.
Ọ ka na-agbanye goolu ma ghara ile anya. O mere ngwa ngwa guzosie ike dị ka otu n'ime Palmeiras 'ndị kachasị mkpa n'akụkọ ihe mere eme na onye Brazil na-esote iji nweta nnukwu ego na Europe. Nke a mechara mee, n'ihi Manchester City. Ndị ọzọ dị ka ha na-ekwukarị bụ akụkọ ihe mere eme.
Gabriel Jesus Ezinụlọ:
NME: Gebriel nna Jesus, Diniz hapụrụ ya mgbe ọ dị nro. Bijog na-ekwu na ya gbara ọsọ na onye hụrụ ya n'anya, gbahapụ obere Gabriel, ụmụnne ya, nwanne ya na nne ya. Nke a bụkwa ihe gbasara Alexis Sanchez.
Nne: Nne Jisos Vera Lucia bu onye ama ama na ndu ya dika nke Henrikh Mkhitaryan. Ọ na-akpọ ya na ekwentị tupu egwuregwu ọ bụla.
Mgbe Gabriel Jesus rutere England, ya na nne ya na nwanne ya nwoke tọrọ ya na ndị enyi ya abụọ, ọ bụ ezie na o kwuru na ya ga-eweta agbata obi ya niile ma ọ bụrụ naanị na nne ya kwere ya. Ha abụọ dị ezigbo nso ma na-asọpụrụ ya nke ukwuu.
Gabriel Jesus na mama m, Vera Lucia.
Ọ bụkwa onye ịdọ aka ná ntị nke ga-adọta ntị Gabriel Jesus mgbe ụfọdụ maka enweghị ohere na egwuregwu dị mkpa. Agbanyeghị, ịkwanyere Jizọs ugwu na ịdọ aka na ntị abụghị esemokwu maka ya.
Nke a bụ n'ihi na a zụrụ ya nke ọma. Vera Lucia mechara zụlite ụmụnne ya anọ ebe ọ na-arụ ọrụ dị ka odibo n'ụlọ na mpaghara Jardim Peri dara ogbenye na Sao Paulo.
Gebriel Jisos mere onye kachasị nta.
Gabriel Jesus Ezinụlọ Foto.
Gabriel Jesus mmekọrịta mmekọrịta:
Ikekwe, ọtụtụ ndị ajụwo. Ọnye na-bụ Gabriel Jesus Girlfriend? Azịza ajụjụ a dị mfe.
Gabriel Jesus n'adịghị Anthony Martial abughi ndi ozo na-ekele mama ya. Nne ya na-achịkwa ụmụ agbọghọ ọ họọrọ ịgbaso na kwa, ọnọdụ nke ndụ mmekọrịta ya bụ 'single' dị ka n'oge ederede Bio ya.
Site n'ikwu na ọ di. Nne ya chere na ya ekwesịghị ịdọpụ uche ya ma lekwasị anya na ọrụ ya. Ọ bụ ihe niile nye ya gụnyere enyi ya nwanyị.
Gebriel nne Jizọs.
Ọ na-elekọta ọrụ ya nke ọma.
Gabriel - onye ọ kpọrọ aha ya 'Nwa' - amachibidoro ịpụ n'obodo ahụ, ị ​​drinkingụ mmanya ma ọ bụ ị smokingụ sịga, ebe a ga-adọkwa WAGS / Girlfriends nke ọhụụ bọọlụ ọhụụ ka adọpụ nwa ya nwoke.
Vera kwuru n'egbughị oge na nyochaa DailyMail: 'Friendmụ nwanyị ga-ebi ndụ n'iwu m, ọ gaghịkwa esusu ọnụ ọnụ na foto ọha.
Ingnọgide na-efe efe nwere ike ime naanị otu oge na mgbe ụfọdụ. Agaghị m anakwere na nwa m nwoke anaghị asọpụrụ ụmụ ndị nwanyị nke ndị ọzọ.
Onweghi nwa m nwoke ga-atụrụ nwa nwanyị ọzọ ime. Achọrọ m ka a kwanyere m ugwu n'ihi na m welitere ha atọ n'onwe m, site na enyemaka nke Chineke. '
O kpughekwara na onye na-eti ihe 'ga-ewedata isi ya mgbe ọ bụla ọ gwara ya okwu. Nakwa dị ka ya, .. 'Enwere m ike ịbụ ezigbo mmadụ, mana achọrọ m ka a kwanyere m ugwu. Gabriel anaghị elelị m anya. ' ọ sịrị.
Gabriel Jesus nwanne na nne.
Gabriel Jesus Biography - Nchịkọta rygwọ:
N'adịghị ka ọtụtụ ndị na-agba ụkwụ ụkwụ, Gabriel Jesus kwere ka nne ya na-achịkwa ego ya. N'ezie, ọ ka na-enweta ego n'akpa uwe site na mama ya 'onye na-ekwusi ike ịchịkwa £ 90,000 kwa izu.
Dị ka Gabriel si kwuo, N'okwu ya; 'Mama m bụ onye agha m… ọ bụ onye isi'
Kemgbe ọ kwagara n'obodo, Vera Lucia Diniz de Jesus ejiri n'aka na ọ natara ụgwọ nwa ya ka o wee nwee ike ịgafe naanị otu ọ chọrọ - 'idebe ụkwụ ya n'ala'.
Ọ na-ejikwa nri ọ na-eri na ebe ọ na-aga. Kama inwe mmetụta dị ka ọnyà dị ka ọtụtụ ga-eme, Jizọs ka nwere ekele maka mmetụta nne ya nwere n'ebe ndụ ya nọ. Dị ka mama ya si kwuo, 'Gabriel ga-abụ nwa m mgbe niile'.
Nne ya bi n'okpuru ụlọ ya ma mee ka ọ gbasoo iwu ya! Onye ọkpụkpọ ahụ kọwara ya ozugbo 'siri ike dribble karịa onye ọ bụla na-agbachitere m chere ihu'.
Ọzọkwa, N'okwu emetụ n'ahụ Instagram, o zoro aka na ya dịka 'Nwanyị agha nke lekọtara m na ụmụnne m mgbe niile'.
Anyị nwere ọtụtụ kpakpando na-eto eto nke nne na-arụ ọrụ dị ukwuu mana anaghị agafe akara ụgwọ. Nke a bụ ihe gbasara Ousmane Dembele.
Gabriel Jesus Biography Eziokwu - forhụnanya maka Jizọs Kraịst:
Nke mbụ, aha ya dị ezigbo mma n'ọhịa dị ka nke Danny Drinkwater. Gabriel Jesus si n'ezinụlọ okpukpe ma kwuo na ọ na-eyiri uwe elu 33 maka Man City maka ụtụ maka afọ a kwenyere na a kpọgidere Jizọs n'obe.
Gabriel Jesus uwe elu nọmba (33) eziokwu.
Gebriel agbaala nkwa na ọ ga-eyiri uwe 33 ahụ ma hụ na ọ dị mma karịa nọmba uwe ọ bụla.
Gabriel na Neymar JR egosiputara ha ihunanya ha n’ebe Jisos Kraist di n’uwa kacha nma nma. Ha abụọ bụ ndị mmeri Olympic na ndị otu Brazil na Rio de Janeiro 2016.
Gabriel Jesus na Neymar hụrụ Kraịst n'anya.
Okwukwe ha emeela ha ezigbo enyi.
Gabriel Jesus Biography - njem nke obodo:
Ọ bụghị kwa ụbọchị ka ụmụ amaala dị afọ iri na itoolu na-akpọ oku site na otu n'ime nnukwu ndị nkuzi egwuregwu ahụ, mana nke ahụ bụ ihe mere Gabriel Jesus.
Onye kpakpando nke Brazil, onye nọ n'etiti etiti mbufe n'etiti Manchester City na Barcelona na-echekwa azụmaahịa nke ya mgbe ọnụọgụ amaghị amata na ihuenyo ya.
N'akụkụ nke ọzọ nke akara ahụ abụghị Pep Guardiola, onye gwara nwata ahụ na o doro anya na ọ ga-arụ ọrụ ya site na ịkwaga na Etihad.
Onye egwu Palmeiras nke gara aga, n'ụzọ doro anya, kpakpando, na-agbagha ruo n'ókè nke na City gbara n'elu ndepụta nke ebe ndị ọ họọrọ.
Barcelona guzobere Neymar na-eduga ọmarịcha mmeghachi omume na nzaghachi, mana ọ pere mpe, akaha: Gabriel sonyeere City maka £ 28m.
Bee obere ọnwa ole na ole ka ọ gasịrị, ọ na-agakwa maka ndị isi Brazil. Ihe ndi ozo ha kwuru bu akuko.
Eziokwu Gabriel Jesus - yledị Egwuregwu na Ike:
Gabriel Jesus bụ onye na-aga n'ihu n'ihu nke nwere ike igwu egwu niile. Onye na-egbu ihe na-egwuri egwu na-egwuri egwu n'etiti oge, ebe njem ya na ụkwụ ya na-enyere aka ịmepụta ohere maka ndị otu na-ewetara ndị ọzọ egwu.
Gabriel bụkwa onye egwuregwu kachasị egwu, nwere ike ịgbapụ ọtụtụ ndị na-agbachitere ma na-agbasiwanye ike oge niile. Ọ na-agbawa agbawa na-enweghị mkpịsị aka, nke na-enye ya ohere iji nwayọọ na-efegharị na mbara igwe mgbe ọ na-agbatị ụkwụ ya.
Ọ makwaara ọkwa nke ọma yana akara aka maka ịbanye na mbara igwe, nke mere ka o siere ndị na-agbachitere ya ike iburu ya. Mmecha ya bụ onye obi ọjọọ dị ka nke onye otu ibe ya Sergio Aguero.
Gabriel Jesus adịghị ike:
Maka ọtụtụ ndị nkuzi karịsịa Pep, isi ihe na-echegbu Gabriel bụ ntozu okè ya. Mgbe ụfọdụ, ọ nwere ike ịpụta ntakịrị itinye ego n'okwu n'ọhịa, oge ụfọdụ ọ na-erute anya mmiri mgbe ihe anaghị aga n'ụzọ ya (nke anaghị adịkarị, enyere). Nke a ka o mere na klọb ochie ya.
Ọ dị mma ilekọta, n'ezie, mana igwu egwu n'egwuregwu a na-amaghị ama na mba ọzọ chọrọ onye ọkpụkpọ ịzụlite akpụkpọ anụ nke Gabriel ka ga-enwe.
Ihe mgbakwunye maka City bụ na, ọ bụ ezie na ọ na-esi ísì ụtọ, ọ na-eto eto na ọnụ ọgụgụ dị egwu, na-eburu ibu ọrụ kwa izu. Site na nduzi Guardiola na ndị enyi ndị ọzọ Brazil na Njikọ iji nyere ya aka idozi, ọ dịghị ihe kpatara nnukwu nchegbu.
Gabriel Jesus Biography - Idol ya:
Idọ ya bụ Ronaldo Luis Nazario de Lima. Gị onwe gị amụrụghị mgbe Akụkọ Mgbe Ochie hụrụ ọkwa ya. Gabriel bịara mata Ronaldo Luis Nazario de Lima mgbe ọ dị afọ 5 mgbe ọ na-ele ma na-eme ememme ya na 2002 FIFA ụwa cup.
Site ụbọchị ahụ gaa n'ihu, ọ kwụsịghị nrọ banyere ịgbaso nzọụkwụ ya. Dị ka ọ gosipụtara n'okpuru, ọ gbanwere nku ya site na etiti etiti ka ọ bụrụ ọgụ n'ihi akụkọ akụkọ Brazil.
N'oge na-adịghị anya, Jizọs ghọrọ ihe na-esote mgbe Ronaldo Brazil bịara na ndekọ ma kwuo na ọ hụrụ ọtụtụ ọdịiche dị n'etiti ya na onye Palmeira. N'ajụjụ ọnụ TV, Ronaldo kwuru, sị:
Dabere na Ronaldo Luis Nazario de Lima,
“M lere Gabriel anya hụ onwe m n’oge gara aga. Ahụrụ m myirịta dị na ya being ọ bụ nwata ma na enwetala nnukwu ọrụ ma nwee nnukwu ọrụ.
Ọ nwere ọdịnihu dị egwu n'ihu ya, ọ na-enwakwa anyị na ihe ọ na-eme ”.
Gabriel Jesus Biography - The Ezi Masks:
Igwe kpakpando achikọtara ihe karịrị 40,000 Pig mask fans na Allianz Parque n'oge ọ nọ na Sao Paulo.
dị nnọọ ka Aubameyang, Gabriel mepụtara ọdịbendị na-ekpuchi ihu. N'ụzọ dị mwute, ọ kwụsịrị iyi ya n'egwuregwu ikpeazụ ya maka ụlọ ọrụ ochie ya, Palmeiras.
Ezi bụ mascot nke Palmeiras mgbe klọb ahụ gbanwere jibes nke ndị ha na ha n'isi na 1990s site na ịnakwere ịkwa emo dịka njirimara ya.
Gabriel Jesus Bio - Nkata Nkata:
Ọ bụ nnukwu onye na-akwado ndị otu egwuregwu basketball ndị America, ndị Golden State Warriors. Ọ na-eyi ndị na-eme egwuregwu egwuregwu mgbatị ahụ. Stephen Curry bụ ihe kpatara o ji akwado ha.
Gabriel Jesus Ọnụma:
Gabriel Jesus nke mbụ uhie uhie nke ọrụ ya adịghị nke ọma. E zigara ya maka ịkụ onye na-elekọta ụlọ n'oge egwuregwu megide Rosario Central.
Ọ were enyemaka nke Stadium nchebe iji mee ka ọ pụọ na pitch. Nke a bụ nke mbụ hell hapụrụ onye na-eti ya ihe.